HALIS CUSUB: Go'aan Adag Oo Lagu Soo Kordhinayo Isticmaalka VAR Ee Horyaalka Premier League. - Gool24.Net
HALIS CUSUB: Go’aan Adag Oo Lagu Soo Kordhinayo Isticmaalka VAR Ee Horyaalka Premier League.
May 15, 2019 Mahamoud Batalaale
Xili ciyaareedka cusub ee soo socda ee horyaalka Premier league waxaa markii ugu horaysay laga hir galin doonaan VAR.
Kadib markii muddo laga doodayay in muuqaal caawiyaha garsoorka VAR lagu soo kodhiyo Premier League waxaa hore loo sharciyeeyay in xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 la higaliyo qalabkan casriga ah.
Laakiin waxaa la soo kordhin doonaa go’aan cusub oo ay maamulka Premier league ku dhaqan galin doonaan isticmaalka VAR ee horyaalka Ingiriiska.
Go’aankan cusub ayaa ah mid ay ciyaartoyda iyo tababarayaashu hali ganaax ku mutaysan karaan haddii ay sameeyaan ficilo aan la doonayn in garsoorka culays lagu saaro.
Intii lagu jiray koobkii aduunka ee Russia 2018 waxaa laga bartay in ciyaartoy badan oo xulalka qaramadii ka qayb galayay ahi ay isku dayeen in ay garsoorka cadaadis ku saaraan in go’aano badan ay VAR ka eegaan.
Laakiin maamulka Premier league oo doonaya in ayna ciyaartoydu wax culays ah saarin garsoorka ayaa diyaariyay qorshe adag oo arintan looga hor tagayo.
Waxaa ciyaartoyda Premier League laga mamnuuci doonaa in ay bixiyaan tilmaamo muujinaya in garsooruhu uu VAR ka hubiyo dhacdo ay ka doodayaan, waxayna taasi keeni doontaa in kaadhka digniinta ah lagu bixiyo.
Ciyaartoy kasta oo isku daya in uu garsooraa u tilmaamo in uu VAR ka soo eego dhacdo lagu muransan yahay ayaa keeni doonta in kaadhka digniinta ah lagu bixiyo taas oo badan karta ganaaxyada ay ciyaartoyda ugu maqnaan karaan min shanta kaadh ee hurdiga ah.
Laakiin waxaa la xaqiijiyay in khabiirada VAR ee ku sugan goobta ‘West London VAR base’ ayay muuqaal caawiyaha garsoorka ka eegi doonaan dhacdo kasta oo muran keeni karta iyada oo aan xataa laga dalban si ay garsooraha u caawiyaan.
Qorshaha uu maamulka Premier league ku doonayo in uu ku horumariyo dhacdooyinkii ceebta ahaa ee sanadaha badanka soo dhacayay horyaalka Ingiriiska ayaa u muuqda mid xal waara keeni kara.
Waxaana la sheegay in mar haddiiba ay khabiirada ‘West London VAR base’ ay si joogto ah u hubin doonaan dhamaan dhacdooyinka kulamada iyada oo aan xataa laga dalban ay meesha ka saari doonto baahida ay ciyaartoyda u qabaan in ay garsoorka cadaadis saaraan.
Dhamaan 380 ka kulan ee horyaalka Premier league ayaa xili ciyaareedka cusub ee soo socda loo adeegsan doonaa VAR.
Waxaa VAR laga hubin doonaa dhamaan goolasha Premier League ee ay kooxuhu dhaliyaan, si la mid ah kaadhadhka casaanka ah ee ay suurtogalka tahay in ayna garsoorku arkayn, waxa kale oo laga eegi doonaa dhacdooyinka rekoodhaha iyo haddii uu garsooruhu kaadh siiyo ciyaartoy uu lambarkiisa ama magiciisa ku qaldamo.
Muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR ayaa wax badan ka badalay kubbada cagta aduunka iyada oo hadda ay sii badanayaan horyaalada Yurub ee isticmaalaya qalabkan casriga ah.
Si kastaba ha ahaatee, in ciyaartoyda Premier League laga mamnuucayo in ay garsoorka ku soo xoomaan si ay cadaadis ugu saaraan in uu VAR eego waxay keeni doontaa in kaadhadh badan oo digniin ah la bixin doono.